Ama-Capricorns: i-horoscope ekwindla ka-2013
Ngomuso ka-2013, i-Capricorn ilindele izinguquko zomuntu siqu nezinguquko ezikhawulwayo kumsebenzi. Ukusekelwa kuzokuvela kude: abokufika noma abalingani abade kakhulu bangenza isipho esihle kakhulu, esingasishiywa. Ekuseni uzothola umbono wefilosofi ngokuphila, ukujula kokucabanga. Uzoyeka ukuphikisana.
Phakathi naphakathi kwekwindla, izingxabano nokuphikisana nabaphathi kungase kuphakame, okuzoholela ekushintsheni komsebenzi. Ukuguqulwa kwamacebo nemigomo kuzofika ngenxa yokushintsha komyalo.
Ekwindla kungcono ukusiza abazali nezingane, ukusekela abangane, ukuchitha isikhathi nomthande wakho. Umzamo uzoletha izithelo zawo.
Umsebenzi ohlukumezayo wamaCapricorns ngoSeptemba uzoheha ukuhleka nokuhleka, kodwa ngeke uqaphele lezi zinkinga. Bulala izifiso ezimbi, shiya kuphela ababambisene nabo ongayenza noma iyiphi iphrojekthi noma uhambe nje ukuyothenga.
Ngo-September, ulwazi oluwusizo kanye nezindaba ezishisayo zizokuza kuwe. Lesi yisikhathi semihlangano ehleliwe, ukuhamba kanye nemfundo eyengeziwe. Manje usujabule ngomtholo wakho. Uma wenza, uzothola imiphumela emihle kakhulu.
Engxenyeni yesibili kaSeptemba, amaCapricorns azokwazi ukusebenzisa izinhlelo zokuhlala isikhathi eside.
Lalela iseluleko sabathandekayo bakho, bazoba ngabanye futhi basize ukugcina ukuvumelana ebuhlotsheni. Ukuze uhlukanise ubuhlobo, thatha isinyathelo. Ukuhlola okubonakalayo okuvelele nokuzizwa.
Kusuke kudingekile ukuthi ulindele izingane ezimangazayo ezimnandi. Ngokuphathelene nokuqala konyaka wezifundo, uzothambekela ekutheni u-styling wobungcweti, izingane zizophila ngokuvumelana nesistimu ye-Spartan.
Ekupheleni kwenyanga uzokwazi ukuxazulula zonke izinkinga zasekhaya. Isikhundla seVenus sizoletha ukubonakala okusha kanye nokuzijabulisa okuhle.
Ubudlelwano nezihlobo buzovumelanisa futhi buzolile. Uzohola umkhandlu womndeni ukuxazulula izinkinga zomndeni.
Ngasekuqaleni kokuwa, okokuqala, zama ukwenza imibuzo yomsebenzi kuqala. Iziphathimandla zilindele kusukela ekusebenzeni okukhulu nokusebenza, futhi lokhu ngeke kube inkinga yeCapricorn.
Engxenyeni yesibili yenyanga uzoqoqa isivuno sezimali. Uzothola okuningi njengoba uhlele, okungenakwenzeka. Imfucuza ngokushesha ezindabeni zezomnotho kungenzeka.
NgoSeptemba, izindaba zezezimali zizohamba kahle, ungakhohlwa ukubuyisela izikweleti futhi ubuyisele imali.
Ama-capricorns agcwele amandla namandla, kodwa kufanele uqinise njalo umzimba. Mayelana nezinhlelo zokwelashwa kwesibindi, ngezinqubo zesikhumba-izimonyo. USepthemba yisikhathi esihle sokuzivocavoca, izimonyo nezinhlelo zezempilo.
Ngisho noma ipheshana lakho lesisu lomathumbu lisebenza njengewashi, akufanele uhlole. Yidla ukudla okunomsoco futhi njalo.
Ekuqaleni kwenyanga, ngeke uzinze ngokwengqondo, ngakho-ke kungcono ukuthi ungahle uhlele izinto ezibalulekile. Ngokushesha ungakwazi ukuzibonakalisa ngokwakho.
Phakathi kwekwindla kuyinkathi yokukhathazeka okukhulu kweCapricorn, kokubili ngokwezinto ezenzekayo kanye nemicimbi. Kungenzeka ukusebenza emkhunjini. Kodwa i-Capricorns ngabantu abazolile futhi abagciniwe. Ubhekana ngokuzinzile nezinkinga, hhayi ukuhlukumeza imizwelo. Ekupheleni kuka-Okthoba, zama ukushintsha ukulungiselelwa futhi ujabule: hamba kumcimbi wezemfashini, uhlangane nabangani.
Ngo-Okthoba, iCapricorns ilinde yonke imizwa ye-palette-uthando: umhawu, intukuthelo, ubunye obuphelele nokuzwana phakathi kobudlelwane.
Kumele kuqashelwe ukuthi uzohileleka ngokujulile ezindabeni zomndeni kanye nobuhlobo nabathandekayo. Izingane zihlela iholidi, ziphange isipho - lokhu kuzozijabulisa.
Yilungiselele ukuthi ekupheleni kwenyanga, umlingani wakho uzodinga, ikakhulukazi ezindabeni zasekhaya. Iwayini elidala kanye nokudumala okukhulu kunokwenzeka. Ungenzi izinqumo ngokushesha. Oxhumana nabo othandwe isikhathi eside bangabuya.
Ngo-Okthoba, iCapricorn kuzodingeka iphishekele izintshisekelo zayo. Ephakathi kwekwindla kuzogcwala izindaba ezisemthethweni nokuxhumana, zama ukuthola okungcono kakhulu kule nzuzo enkulu.
Emsebenzini, ukhuthazele, futhi ekupheleni kwenyanga uzothola imiphumela emalindelwe isikhathi eside emizamweni yakho. Ukuphathwa kuzohlola umsebenzi wakho kufanele, futhi lokhu kuzothinta ohlangothini lwezezimali. Isimo semali sizothuthukisa, uzothola izimali ezilinde isikhathi eside, ezibalwe.
Ngo-Okthoba, i-ibex izokwazi ukuveza ngokwakhiwa.
Ngo-Okthoba, landela umqondo wakho. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumaKapricorns, anesifo esingelapheki. Thola isikhathi sakho, i-vitamin therapy izoba usizo.
Izimpungushe ze-autumn ziyakwazi ukushisa, azigcini izinso, futhi amathuba okuvutha aphezulu.
Ezemidlalo kufanele zenziwe kancane, zibale amandla akho. Futhi ngo-Okthoba, qaphela ukuqinisa uhlelo lwethambo, udle imikhiqizo yobisi eminingi.
NgoNovemba, iCapricorn izogcwala amandla nokuphefumulelwa. Ungaqala ukuphila kusukela ekuqaleni. Isikhathi siphelele ukusikisela kokudala nokuqala. Kuzophumelela ukushintsha isithombe noma ubuciko. Ungakwazi ukunqoba izintaba ezintsha, ubunzima buzophefumlelwa kuphela. Khumbula ukuthi abangani bakho bayokusekela njalo. Ama-Capricorns azokwazi ukumela izithakazelo zomuntu kunoma yisiphi isimo.
NgoNovemba, iCapricorn izokhokha ukuxhumana okujabulisayo, ukuzijabulisa, imihlangano nabangani, okubona ngezikhathi ezithile ngenxa yomsebenzi.
NgoNovemba yisikhathi esihle sokuba izimbuzi zihlakulele impilo yomuntu siqu. Yazisa injabulo yakho. Isikhathi esithandanayo sothando ubudlelwane buzofika kuphela ekupheleni kwenyanga. Bobabili wena nomlingani wakho uzovikela iphuzu lakho lokubuka, kuyoba nzima kuwe ukuthi uvumelane. Kodwa ukubuyisana kuyoba okuthakazelisayo. Yakha ubuhlobo kuze kube sevikini eledlule kaNovemba, kungenjalo kuyoba nzima ngisho nangokwengeziwe kwemizwa.
Ebudlelwaneni nabantwana, yibani umzali, nomngani. Isikhundla seMercury, i-Venus ne-Mars sixwayisa ama-capricorns ukuthi nezihlobo nabangane khona kungenzeka kube nokwahlukana phakathi kwe-scavengers.
NgoNovemba - inyanga ecebileyo yezimpahla zeCapricorn. Lesi sikhathi uzothola umvuzo wezinto ezibonakalayo futhi usebenzise izinto zakho ezingenangqondo.
Cishe, ungalindele ngokungahleliwe imibuzo ethile esemthethweni. Ikakhulukazi ekupheleni kukaNovemba, ungazinikeli noma ubani kumasu akho, kungase kube khona ukuzondla okukuzungezile.
Endaweni yezezimali, u-Novemba yisikhathi esingahle. Ukuthengiswa okukhulu kwezebhizinisi akufanelekile ukwenza. Awukwazi ukuvumelana nabalingani, amathuba okukhohlisa aphezulu.
Esikhathini esibucayi, izinkanyezi ngeke zilethe izinkinga kumgcinimafa womndeni kubameleli be-Sign Capricorn. Lapha konke kuthule ngokuphelele futhi kulinganise. Ukulungiselela amadokhumenti noma ukuthola izinto ezibalulekile kuhlelwe phakathi nenyanga.
Ukuqedwa kwekwindla kuphelele ukuqeda izifo ezingelapheki. Khokha ngokukhethekile umzimba, sebenzisa utshwala obuncane.
Ama-Capricorns-abesifazane, hamba, yisikhathi esikhulu sokwenza izinyathelo zemilingo ekuphindukuzalwa kabusha. Zichitha isikhathi uzithande.
Ama-Capricorns ngoNovemba kufanele ahlanganyele ekuvuseleleni umzimba futhi akhule amandla. Novemba yisikhathi esihle salokhu. Izindlela nezindlela zokupheka ozithembayo, zikhethe wena.
I-Horoscope yabesifazane baseLibra ngoMashi 2017
I-Horoscope ngo-September 2016 i-Capricorn
I-Horoscope ye-Aquarius-Abesifazane ngo-Ephreli 2017
I-Horoscope ngo-September 2016 ye-Libra
U-Olga Buzova waphinda wamangaza wonke umuntu
Umoya womama ngokuthuthukiswa kwengane
Ukwakhiwa kokubunjwa okuvela ezindlini
Ukupheka okusheshayo nokumnandi okupheka
Kudla isitayela esidala saseRussia
Amaqebelengwane ngama-milk condensed
Indlela yokufundisa ingane embizeni?
Izenzo zokuzivocavoca zansuku zonke izingane zingama-3-6 ubudala
Indlela yokukhubazeka iluma izindebe zakho?
Uma indoda ikhulile kakhulu, ingabe umehluko?
Isaladi lesithelo nge-kiwi
Izilwane ezifuywayo ngesignali yezinkanyezi